Company Profile - Yangzhou Jetway Tourism Co., Ltd
Bamboo borosy nify
Hotel Fiharatana Kit
Naorina tamin'ny 2001, ny orinasa no misy ao amin'ny Yangzhou, Jiangsu Province, Sina. Ny vokatra dia isan-karazany miainga amin'ny Bathroom Accessories, Bedroom Accessories ho Cosmetic Accessories, sns Rehefa 16years fampandrosoana, ny isan-taona turnover efa nihoatra 12 tapitrisa dolara. Afa-tsy, mba hanolotra anao ny tsara indrindra sy mahafinaritra mpanjifa vokatra, dia manome anao amin'ny matihanina dingana famokarana, fanaraha-maso hentitra ny manta fitaovana, rafitra fanaraha-maso ny kalitao tanteraka ary koa ny fahaizana manufactory mahery.
Any amin'ny trano fandraisam-bahiny amenity tanàna niaviany, ny orinasa manarona tanteraka faritra ny 6000 metatra toradroa, anisan'izany ny 6 atrikasa, trano fanatobiana entana sy famokarana 12 andalana. Ny orinasa ny famatsian fahaizany mahatratra 20 tapitrisa isam-bolana milentika. 150 mpiasa za-draharaha sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny ekipa dia afaka antoka tsara indrindra ny famokarana tsara.
Voalohany indrindra, dia manana ekipa matihanina QC hifehezana ny famokarana. Faharoa, isika dia manana firaketana ny tsipiriany rehetra nonconformity vokatra. Farany, isika no mitandrina ny fitondran-tena mifanaraka amin'ny mari-pamantarana sy lalàna avy amin'ny fitondram-panjakana.
Habe, karazana & loko dia azo atao ny filaminana. Afaka mandefa antsika ny tsipiriany fitakiana ary faly isika, dia aoka mba hanomanana teny nindramina tsirairay ho an'ny vokatra eo fandraisana ny vaovao. Raha vao voafantina ny natao, ny mpanolo-tsaina manokana vokatra ekipa mpikambana hiasa aminao sary safidy manan-danja sy ny fanaterana ny fotoana.
Professional famolavolana ekipa
Professional ekipa ahitana ny endrika sy ny ara-teknika mpiasa. Ny ekipa dia manana fahafahana hanao ny mari ny vokatra isan-karazany toy ny isan-ny hevitra.
Ny mpanjifa indrindra avy endrika Amerika, Eoropa, Azia Afovoany-upscale tsena. Ary efa naondrana any amin'ny firenena mihoatra ny 70 sy ny faritra.
Ny fonosana ny vokatra manana baoritra, boaty fanamboarana ny taratasy, Eco-namana kitapo, PE kitapo, mitafo fanitso taratasy, PP sarimihetsika, blister karatra. Ary ny entana 'loko, habeny, famantarana fanontam-pirinty azo atao araka ny mpanjifa ny fangatahana.
No.10 Tongzhou Road, Hangji Industrial Park, Yangzhou, 225111, Jiangsu, Sina
Isan-taona Party 2017
Frantsa EQUIP'HOTEL 2016
Hanangananay New Sampana In Beijing